Chiso chemeso, Magurovhosi, pahuma chekupisa thermometer - ICT
Hangzhou Intelligent Creative Technology Co, Ltd. （ICT） ndeye yakakurumbira fekitori muChina automation indasitiri. Izvo zvakanyanya zvigadzirwa zvakadai seyunivhesiti Robhoti, otomatiki kurongedza muchina, Automatic mask yekugadzira mutsara, nezvimwe.
ICT yagara ichiteedzera kune matatu matanho: Intelligent maindasitiri mhinduro server pasi, mafungiro ekugadzira akasanganiswa mukugadzirwa kwechigadzirwa, Tekinoroji inoita kuti kugadzirwa kwemaindasitiri kuve nyore.
Hangzhou Intelligent Creative Technology Co, Ltd.（ICT） fekitori inozivikanwa muChina michina yemagetsi. Izvo zvakanyanya zvigadzirwa zvakadai seyunivhesiti Robhoti, otomatiki kurongedza muchina, Automatic mask yekugadzira mutsara, nezvimwe.
Ungasarudza sei mushini wemashini unogona kusangana nezvako zvaunoda zvekugadzira?
Kutanga, tiudze mhando yemaski iwe yaunoda kuburitsa; Chechipiri, mumusika maski muchina une mhando dzinotevera: kupeta N95 masiki kugadzira muchina, Flat yekurapa masiki yekugadzira muchina, Cup N95 masiki kugadzira muchina, nezvimwewo. Yetatu, sarudza mushini wemasai, semi-otomatiki kana ozadza otomatiki, zvinoenderana neako ...
Izvo zvigadzirwa zvakanakira otomatiki kurongedza muchina？
Zvakaita se: kumeso kwemasokisi, Cookies, chokoreti, chizi, zvipo.
China supporter yakakwirira epurasitiki kutsvedza